Ny fahaveloman'ny saka lehibe afrikana: ahiahy ireo manampahaizana momba ny fiainana dia sy ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Ny fahaveloman'ny saka lehibe afrikana: ahiahy ireo manampahaizana momba ny fiainana dia sy ny fizahantany
Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Saka lehibe afrikana
Manamarika ny andro eran-tany ho an'ny liona amin'ity volana ity, ny fiarovana ny bibidia any Afrika dia manahy ny amin'ny ho avin'ny iray amin'ireo saka afrikana lehibe - ny liona - ao amin'ny kaontinanta taorian'ny fitomboan'ny isan'ny syndicat mangalatra mitady ny faritra amin'ny vatany. Ny vondrona mpiaro ny bibidia sy ny fikambanana mpanao asa soa any Afrika dia manahy ny amin'ny fiakaran'ny tranga ny fanendahana liona, ny ankamaroany any Afrika Andrefana izay ahitan-doza ireo biby malaza ireo, raha nitombo kosa ny fihazana nanerana ny faritra atsinanana sy atsimon'i Afrika.
Ny fitomboan'ny fitakiana ny ampahany amin'ny liona any Azia atsimo atsinanana dia nampiroborobo ny fanendahana any Afrika.
Ny fidirana an-tsokosoko mpiandry omby amin'ny valan-javaboary miaro ny bibidia dia niteraka fifandirana teo amin'ireo mpiandry omby teratany.
Izany dia mitarika amin'ny famonoana liona amin'ny alàlan'ny fanapoizinana, fitifirana lefona, ary zana-tsipìka misy poizina.
“Fanaparitahana be fanapoizinana liona dia notaterina tany Afrika Atsinanana ihany koa fa ny vondron'olona mpifindrafindra monina dia nanao valifaty taorian'ny fanafihana ny biby fiompin'izy ireo, ”hoy i Edith Kabesiime, mpitantana ny fampielezan-kevitra momba ny fiainana an-tany ao amin'ny biraon'ny World Animal Protection any Kenya any Kenya.
Toeram-piarovana masina - tobin'ny Crater Ngorongoro
Nilaza izy fa ny fangatahana vokatra liona, toy ny taolana sy nify, ao amin'ny indostrian'ny fitsaboana raokandro dia nampiroborobo ny fanjonoana azy ireo tany an'ala afrikanina ihany koa.
Kabesiime dia nilaza fa ny fandrahonana hafa ho an'ny liona afrikana dia misy ny fiompiana babo sy ny fihazana amboara, ary nampiany fa ny fametrahana politika vaovao, fitsipika ary fampielezan-kevitra avo lenta dia fanalahidin'ny famonjena ny karnavora sy ny fihazonana ny faharetan'ny fonenana voajanaharin'ny kaontinanta.
Ny isan'ny liona afrikanina dia tombanana ho nidina hatramin'ny 50% tao anatin'ny 25 taona lasa. Nilaza ny manampahaizana momba ny fiarovana ny tontolo iainana fa misy loza mitatao amin'ny fahaveloman'ny liona noho ny fahaverezan'ny toeram-ponenany, ny fanenjehana noho ny adin'olombelona, ​​ary ny firongatry ny varotra tsy ara-dalàna amin'ny faritra liona.
"Ny liona dia ampahany lehibe amin'ny biodiversité-ntsika sy ny tontolo iainana voajanahary, ary ity hetsika ity dia hanampy amin'ny fampahafantarana fotsiny ny zava-manjo azy ireo fa hampamirapiratra ny fahitana amin'ny fahombiazana maro hafa izay mila ampitombointsika mba hiantohana ny faharetan'izy ireo amin'ny ho avy," Kenyan Tourism Nilaza ny minisitra Andriamatoa Najib Balala.
Ny antontan'isa avy amin'ny Fiarovana ny biby manerantany dia manondro fa ny isan'ny liona any Afrika amin'izao fotoana izao dia tombanana ho 20,000, latsaky ny liona 200,000 XNUMX eo ho eo zato taona lasa izay.
I Afrika atsimo no firenena tokana mamela ny fiompiana liona lehibe, izay itehirizana ireo biby ao anaty tranom-borona na vala.
Ny famonoana liona ho an'ny taolany sy ireo faritra hafa dia nanjary fandrahonana vao haingana. Na dia tsy ampahany amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa aza ny taolana liona, rehefa mihena ny isan'ny tigra, ireo vokatra mora azo ireo dia miditra amin'ny tsenan'ny bibidia tsy manara-dalàna.
Ny liona no biby manintona indrindra ary mitarika mpizahatany marobe amin'ny safari any Afrika Atsinanana.